आयो तीन करोड नेपालीलाई निकै ठुलो खुशीको खबर : मेलम्चीको डाडा भित्र सुन भेटियो, सुन यस्तो अवस्थामा छ, अब देश धनि हुँदै (भिडियो सहित हेरी शेयर गर्दै जानुहोस्) – पुरा पढ्नुहोस्……
अहिले मेलम्चीको डाडा कटानमा निस्केका चम्किला पहेला टुक्राहरु महङो धातु फेला परेका छन् । नेपालमा सुन खानिका धेरै डाडा हुन सक्ने छन । बिशेष गरी समुन्द्री क्षेत्र मरुभुमी र अग्ला हिमाली क्षेत्र एस्ता महङा धातु लुकेका हुन्छन ।
हाम्रो देशमा एस्ता खानिको खोजी गर्ने प्रबिधी नहुँदा भनौ या आयोजना महँगो हुने हुँदा खोजी भएको छैन । अहिले मेलम्चीको डाडा कटानमा निस्केका चम्किला पहेला तुक्राहरु सुन हुन सक्छन या त अन्य कुनै महँगो खनिज सम्पदा पनि हुन सक्छ तेसैले पनि यो सुरक्षा सँगै सरकारी निकाए अन्तर्गतको खानि विभागले यसको टुङो छिट्टै गर्ने छन् |
हेर्नुहोस यो भिडियो…………..
ड्युटीमा रहेका प्रहरीहरुलाई बन्धक बनाएर ती प्रहरी अधिकारीहरुको बर्दी र गाडी लुटेर त्यही वर्दी लगाइ प्रहरीकै गाडीमा एक युवतीलाई अपहरण गरेको सनसनीखेज घटना बाहिरिएको छ ।
भारतको मध्य प्रदेशमा ती अपहरणकारीहरुले यस्तो फिल्मी शैलीमा अपहरण गरेका हुन् । उनीहरुले पहिले प्रहरीको गाडी कब्जा गरे । गाडीमा भएका प्रहरी अधिकारीहरुलाई बन्धक बनाएर उनीहरुको वर्दी खोल्न लगाए ।
प्रहरीको वर्दी लगाएर ५ जना अपहरणकारीहरु युवतीको घर पुगे । त्यसपछि उनीहरुले युवतीलाई अपहरण गरेर प्रहरीकै गाडीमा लिएर गए । पूरै घटनाक्रम चलिरहँदा उनीहरुले सबै प्रहरी अधिकारीहरुलाई अर्को जीपमा बन्धक बनाएर राखे ।
अन्त्यमा जाने बेला उनीहरुले प्रहरी अधिकारीहरुलाई वर्दी र गाडी फिर्ता दिएर फरार भए । उनीहरुले फर्केर आएपछि प्रहरीको गाडी र वर्दी छोडेर आफ्नो जीपमा युवतीलाई लिएर फरार भएका थिए ।
स्थानीय डन देवराज सिंहले आफ्ना ४ साथीहरुसँग मिलेर अपहरण गरेको बताइएको छ । शनिबार घटना भएकोमा प्रहरीले दुई दिन बितिसक्दा पनि कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
बन्धक बनाइएका प्रहरीका अनुसार २७ जनवरीका दिन राती साढे ११ बजे प्रहरी चौकीमा फोन आएको थियो । फोन गर्नेले एक व्यक्तिले मदिराको नशामा होहल्ला गरेको बताएको थियो । सूचना पाएपछि प्रहरीको टिम घटनास्थल पुग्यो । जहाँ सडकको किनारमा एक व्यक्ति लडेका थिए ।
प्रहरीले गाडीबाट ओर्लेर उनलाई उठाउन खोज्दा उनले प्रहरीमाथि पेस्तोल सोझ्याए । यत्तिकैमा वरिपरिबाट अन्य ४ जना पनि बन्दुकसहित आए । उनीहरुले सबै प्रहरीहरुलाई बन्धक बनाए । उनीहरुको बर्दी खोल्न लगाए र उनीहरुलाई अर्को जीपमा राखे । त्यसपछि ती अभियुक्तहरु प्रहरीको वर्दी लगाइ प्रहरीकै जीप लिएर बमुरहा गाउँ गए ।
गाउँ पुगेपछि उनीहरुले एउटा घरको ढोका ढक्ढक्याए । ढोका खोल्न युवतीका पिता आए । प्रहरीको वर्दी लगाएका उनीहरुले युवतीका पितालाई थानाबाट फोन आएको र थानेदारले बोलाएको भन्दै प्रहरी चौकी जान भने ।
पीडित परिवारले आनाकानी गरे तर उनीहरुले युवतीका पिता, काका र १८ वर्षकी युवतीलाई जबरजस्ती लिएर हिँडे । बाटोमा आएपछि उनीहरुले प्रहरीको गाडीमा वर्दी र युवतीका पिता र काकालाई छोडे । त्यसपछि युवतीलाई लिएर अर्को गाडीमा फरार भए ।
माघ १५, २०७४ – जिल्ला अदालत जाजरकोटले अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको नाममा ठगी गर्ने एक जोडीलाई दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश देवकुमार गिरीको ईजलासले काठमाण्डौं १३, गोगंबुका अनिल अधिकारी र उनकी श्रीमती सरस्वतीलाई जरिवाना र कैदको फैसला गरेको हो ।
ठगी गर्ने जोडीलाई जनही १ वर्ष कैद र १ लाख ३३ हजार जरिवाना गरेको श्रेस्तेदार मेघराज चापागाईले जानकारी दिनुभयो । अधिकारी जोडीले अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एसिज मार्फत अनुदान वितरणका लागि बैंकमा खाता खोल्ने नाममा ठगी गरेको अदालतको ठहर छ ।
उनीहरुले नक्कली संस्थाका नाममा कुशे गाउँपालिका – ५ खुर्पा, ढीमे र दम्दालाका गरीब तथा दलितबाट कृषि तथा गरिबी निवारण समूह गठन गरेर रकम ठगी गरेका थिए ।
तपाईंहरूको अभिभावकहरूमध्ये कसैले जुँगा पालेको पक्कै देख्नुभएको होला। केटाहरू बिस्तारै युवा हुँदै गएपछि तपाइर्ंहरूको पनि जुँगा पलाउने छ। कतिपयलाई जुँगा आकर्षक लाग्ने गर्छ भने कतिपयलाई जुँगा झन्झटिलो पनि लाग्ने गर्छ।
जुँगा काट्दै गएपछि यसमा कडापन पनि बढ्दै जाने गर्छ। कतिपय सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्नेहरूले कपालको वृद्धि तीव्र रूपमा गर्ने दावा पनि गरेका हुन्छन्।
उनीहरूको दावा जेजस्तो भए पनि मानिसको मुहारको रौं बिस्तारै बाक्लो हुने र निश्चित उमेरसम्म बढ्ने हुन्छ भने वृद्धअवस्थामा आउँदा यसको वृद्धिदर पनि कम हुने गर्छ। रौंको निर्माण क्रेटिन र प्रोटिनमार्फत् हुने गर्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसको मुहारको रौंको वृद्धिदर औसत एक महिनामा आधा इन्च हुने गर्छ भन्ने रहेको छ।
प्रहरीको वर्दी र गाडी लुटेर बनाए बन्धक, त्यही वर्दी लगाएर प्रहरीकै गाडीमा युवतीको अपहरण
भारतको मध्य प्रदेशमा ती अपहरणकारीहरुले यस्तो फिल्मी शैलीमा अपहरण गरेका हुन् । उनीहरुले पहिले प्रहरीको गाडी कब्जा गरे । गाडीमा भएका प्रहरी
अधिकारीहरुलाई बन्धक बनाएर उनीहरुको वर्दी खोल्न लगाए । प्रहरीको वर्दी लगाएर ५ जना अपहरणकारीहरु युवतीको घर पुगे । त्यसपछि उनीहरुले युवतीलाई अपहरण गरेर प्रहरीकै गाडीमा लिएर गए । पूरै घटनाक्रम चलिरहँदा उनीहरुले सबै प्रहरी
अधिकारीहरुलाई अर्को जीपमा बन्धक बनाएर राखे । अन्त्यमा जाने बेला उनीहरुले प्रहरी अधिकारीहरुलाई वर्दी र गाडी फिर्ता दिएर फरार भए । उनीहरुले फर्केर आएपछि प्रहरीको गाडी र वर्दी छोडेर आफ्नो जीपमा युवतीलाई लिएर फरार भएका थिए । स्थानीय डन देवराज सिंहले आफ्ना ४ साथीहरुसँग मिलेर अपहरण गरेको बताइएको छ । शनिबार घटना भएकोमा प्रहरीले
दुई दिन बितिसक्दा पनि कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । बन्धक बनाइएका प्रहरीका अनुसार २७ जनवरीका दिन राती साढे ११ बजे प्रहरी चौकीमा फोन आएको थियो । फोन गर्नेले एक व्यक्तिले मदिराको नशामा होहल्ला गरेको बताएको थियो । सूचना पाएपछि प्रहरीको टिम घटनास्थल पुग्यो । जहाँ सडकको किनारमा एक व्यक्ति लडेका थिए ।
गाउँ पुगेपछि उनीहरुले एउटा घरको ढोका ढक्ढक्याए । ढोका खोल्न युवतीका पिता आए । प्रहरीको वर्दी लगाएका उनीहरुले युवतीका पितालाई थानाबाट फोन आएको र थानेदारले बोलाएको भन्दै प्रहरी चौकी जान भने । पीडित परिवारले
आनाकानी गरे तर उनीहरुले युवतीका पिता, काका र १८ वर्षकी युवतीलाई जबरजस्ती लिएर हिँडे । बाटोमा आएपछि उनीहरुले प्रहरीको गाडीमा वर्दी र युवतीका पिता र काकालाई छोडे । त्यसपछि युवतीलाई लिएर अर्को गाडीमा फरार भए ।
Prevफेरि पनि भारतको दादागिरी, सडक बनाउँदा एसएसबीको अबरोध
Nextज्योतिषः पर्सी निकै दुर्लभ खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, यी ९ राशीमा रहनेछ ३० दिनसम्म यस्तो खतराक प्रभाव ; पढेर शतर्क रहनुस
जोन तामाङ हराउनुको मुख्य कारण ओली भयको भन्दै कार्वाही गर्न परिवारको माग…
पैसा पठाउदै हुनुनछ ? साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको यस्तो छ दरभाउ
”आज जन्म दिन माफ गर ! आमा तिम्रो सपना पूरा गर्न सकिन”-जन्मदिनमा सरु सुनारको भा,वुक लेख
भर्खरै नेपाली सेनाका २ जवान रङेहात पक्राउ